Bacriminta for weelasha beerta geedo yaryar - Shiinaha Qingdao King Good Qalabka New
Dhir koray in weelasha u baahan doontaa bacrimin ka badan kuwa ku koray beerta. Taasi waa sababta oo ah waxay leedahay ee ma suuroowdaa jid buuxsama nafaqooyinka ilaa ay u isticmaalaan sidii ay u koraan. Laakiin ha ka welwelin, uma baahnid inaad si ay u iibsadaan wax kasta oo bacrimin sheeegateen oo si gaar ah loogu talagalay weelasha aad, waxaad isticmaali kartaa bacriminta isku mid ah beero geedo yaryar oo weelal aad sidoo kale! talooyinka My top for gaabis ah ha loo sii daayo Bacriminta organic for geedo yaryar koray in weelasha waa Healthy Grow bacrimin geedo yaryar organic iyo Sustane oo dhan cunto dhirta dabiiciga ah.
Related Post: A weel sheet Qiyaanoole beerta
Waayo, weelasha, waa fikrad wanaagsan in aad ku darto gaabis ah ha loo sii daayo dhagaxyada ah bacriminta organic weelka, iyo sidoo kale iyagoo isticmaalaya bacrimin biyo L a oo dhan xilli sii kordhaya. Waxaad ku dari kartaa gaabis ah ha loo sii daayo bacriminta beerta geedo yaryar organic ah ciidda ka hor dhalatada oo aad beerto, ama aad ku rushaysaa yaabaa dhagaxyada ah on top of ciidda oo ku xoqin galay uus ka dib markii laga beerto
n sii dheer si aad u yarayso dhagaxyada ah ha loo sii daayo, waxaad isticmaali kartaa biyo Bacriminta L weelasha oo dhan xilli sii kordhaya in ay sii dhalatada oo aad sii kordhaya xoog leh. Biyaha Bacriminta L waa weyn ee dhalatada oo aad la siinayo boost deg deg ah ee nafaqooyinka, laakiin ay waxaa loo isticmaalaa ilaa (ama ka dheriga maydhay) si deg deg ah si ay u baahan yihiin in intaa ka badan in la dalbadaa.
Related Post: 5 talooyin kordhaya basbaaska weyn
biyo nooca lagu bacrimiyo aan ugu jeclaa L Jannooyin geedo yaryar yihiin emulsion kalluunka iyo shaaha compost. Ama ka mid ah Bacriminta organic weyn shaqeeyaan si ay u sii beero geedo yaryar oo weel kordhaya xoog xagaagan oo dhan. Laakiin aad uma baahna in ay addunyada ula badan lagu quudinta weel dhalatada oo aad koray on jadwal joogto ah, sidaas darteed ha ka welwelin haddii aad ilowdo tallaabo this.
Dhir koray in weelasha u baahan doontaa daryeel dheeraad ah oo bacrimin tahay dhalatada oo koray beerta. Laakiin isticmaalaya bacrimin Jannooyin geedo yaryar iyo weelasha waa u fududahay, gaar ahaan haddii aad bilowdo taajir, ciidda organic iyo sida loo isticmaalo Bacriminta dabiiciga ah.